Rant: Izwi re "P" | Martech Zone
Rant: Izwi re "P"
Chitatu, July 2, 2014 Douglas Karr
Vatengesi vakura vanonakidzwa nekutaura nezvazvo Dzoka Investment. Nezuro, ndakaenda kumusangano nekambani yezvivakwa yaive nematambudziko nehurongwa hwavo hwewebhu. Bhurocha ravo saiti yanga isiri kutyaira zvakawandisa zvinotungamira uye ivo vaishandisa mari yakati wandei pane akati wandei ezvirongwa zvekutyaira zvinotungamira mune yavo yekutengesa fanera. Dambudziko ratakatora nderekuti ivo vaibhadhara kumakambani ese aya kukwikwidza navo pamhepo.
Kutyaira tichidzokera kumashure kubva kune yavo yekushandura chiyero uye mari padhuze, isu takabatsira kuona kuti nderudzii rwekukanganisa nzira yekutengesa yepamhepo pamhepo inogona kuita kudzikisa mutengo mutobvu pasi, kuwedzera huwandu hwevatungamiriri, uye kudzora kwavo kuvimba kune vechitatu-mapato. Haisi maitiro ehusiku- zvinoda kukurumidza uye zano rezvenguva refu kuita shanduko. Izvo zvinoita kunge zvinowanzo kuve zvinonetsa nemakambani akapindwa muropa nevechitatu-bato rinotungamira masosi.
Vakafara kwazvo nemusangano uye isu tichatevera kutevera matanho anotevera. Sezvo ini ndanga ndichitaura kune wevadzidzi pamusoro pazvo, zvakadaro, ini handina kugona kubatsira asi kufunga kuti iyi yese hurukuro yekudyara, kudzoka kune investment, kushambadzira mari, kushambadzira mutengo ... zvese zvinotora pane imwechete zano. Kuti ugadzire bhajeti rekushambadzira, iwe unofanirwa kuwedzera purofiti kune imwe kambani.
Gare gare, ini ndanga ndichiverenga mune yekudyidzana hurukuro nezvekuti makambani anongoitira hanya nezve purofiti. Handibvumirane zvachose. 99% emakambani atakashanda nawo - kubva kumakambani makuru eruzhinji kusvika kune madiki madiki ekutanga - purofiti yakayerwa asi yaive isingawanzo muyero webudiriro yavo. Muchokwadi, kuwanikwa kwevatengi, kuchengetedzwa kwevatengi, kuwedzerwa kwevashandi, masimba, kuvimba, uye chikamu chemusika chagara chiri chepamusoro pane radar sezvatataura nezvekubatsira makambani. Ini zvechokwadi handina kumbove nekambani inosvika kwandiri ndokutaura izvozvo isu tinoda kuwedzera purofiti - ungabatsira sei?
Izvo zvakati, zvinoshungurudza kuti iro "P" izwi rave iro rinazevezerwa pane kudaidzira kubva kugomo rine ruzha. Pundutso haina kufanana nemakaro. Mhindu ndiyo inogonesa makambani kuhaya, inoita kuti makambani akure, kugonesa makambani kudyara mukutsvaga nekuvandudza, uye - pakupedzisira - purofiti ndiyo inotorwa nemakambani. Mune mamwe mazwi, iyo yepamusoro purofiti yemahara yekambani, zvirinani kune hupfumi hwedu hwese. Mari yepamusoro inounza mari yepamusoro yemitero yekutsigira vagari vedu varombo. Mari yepamusoro inoita kuti makambani senge angu akure uye agone mukana wekupfuurira mberi nebasa kune avo vari kutsvaga basa kana kutsvaga kufambira mberi.
Makaro ndipo apo makambani anokanganisa hupfumi zvichitorera vashandi vadzo, vatengi, uye nzanga. Iwo makambani ane pundutso kwazvo ndinoziva anobhadhara vashandi vavo mushe, vanoramba vachivandudza ruzivo rwevatengi vavo, uye vodyara uye vanopa zvakawanda kunzanga. Uye ivo vanozviita kuburikidza nekuzvidira kuunganidza hupfumi, kwete kutora.
Ini handifunge kuti isu tinofanirwa kunyarara nezve kushambadzira uye kukanganisa kwayo purofiti. Ini ndinofunga tinofanirwa kupemberera purofiti… yakakura, iri nani. Uye isu hatifanire kunge tichitsvaga nzira dzekudzikisira kuburikidza nemitero nemirau. Hazvibvumirane.
Hezvino zvekuwedzera purofiti yako uye yako purofiti margin!
Tags: kushambadzira mutengocorporationsmbayoinivhesitimendiMarketingmari yekushambadzirabatsirodzoka pakudyara